के तपाई आफ्नै मोरिंगा उत्पादन बनाउन चाहनुहुन्छ? - Moringa Wholesale Supplier Exporter | Private Label Moringa Manufacture | Moringa Powder - Moringa Leaves - Moringa Oleifera Capsule | Daun Kelor Grosir
Home / Info Lombok Gili / के तपाई आफ्नै मोरिंगा उत्पादन बनाउन चाहनुहुन्छ?
के तपाई आफ्नै मोरिंगा उत्पादन बनाउन चाहनुहुन्छ?
राम्रो समाचार! हामी तपाईंको आफ्नै ब्रान्ड / निजी लेबल मोरिंगा / मोरिंगा ओलिफेराको सेतो लेबल उत्पादनहरू प्रयोग गरेर मोरिंगा तयार उत्पादनहरू उत्पादन गर्न सक्छौं
सबै उत्पादन प्रक्रिया हामीलाई छोड्नुहोस्, तपाईंले भर्खरै आफ्नो ब्रान्ड अन्तर्गत अन्तिम समाप्त प्याकेज गरिएका सामानहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ।
B2C कम्पनीहरू, सुपरमार्केटहरू, होटल र क्याफेहरू, रेस्टुरेन्ट चेन मालिकहरू, व्यापारिक कम्पनीहरू, इत्यादिका लागि धेरै उपयुक्त। कृपया हामीलाई व्हाट्सएप नम्बर +62-877-5801-6000 मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस्।
हाम्रो Ccmpany जैविक मोरिङ्गा पात पाउडर, मोरिङ्गा बीउ र मोरिंगा तेल को एक अग्रणी निर्माता, आपूर्तिकर्ता र निर्यातक हो।
हामी एक एकीकृत मोरिङ्गा कम्पनी हौं जसले मोरिङ्गा फार्महरू प्रबन्ध गर्नका लागि उत्पादनहरूको मूल्य थपिएको मोरिङ्गा दायराको उत्पादनसँग सम्झौता गर्दछ।
हामी जैविक मोरिङ्गा पात पाउडर विश्वभर 20 भन्दा बढी देशहरूमा निर्यात गर्छौं।
धेरै जसो प्रमुख न्यूट्रास्युटिकल ब्रान्डहरूले हाम्रो मोरिंगा पातको पाउडर तिनीहरूको ढाँचामा प्रयोग गर्दै आएका छन्।
हाम्रो मोरिंगा फार्म र कारखाना इन्डोनेसियाको पश्चिम नुसा टेङ्गारा प्रान्तमा अवस्थित छ, ट्राफिक भीड र प्रदूषणकारी उद्योगहरूबाट माइल टाढा।
हामी सयौं साना किसानहरूसँग काम गर्छौं र उष्णकटिबंधीय मौसममा विश्वको उत्कृष्ट गुणस्तर मोरिंगा खेती गर्न निष्पक्ष व्यापार समाज गठन गरेका छौं। हामीसँग पूर्ण पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला छ।
हाम्रा सबै उत्पादनहरू खेतमा पत्ता लगाउन सकिन्छ जहाँ यो उत्पत्ति भयो। हामी स्रोतबाट सीधै उत्तम गुणस्तरको अर्गानिक मोरिंगा उत्पादनहरू प्रस्ताव गर्छौं।
आकारमा सानो भए पनि, मोरिंगा पातहरूमा धेरै महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभहरू छन्। वास्तवमा, वैज्ञानिकहरूले यसलाई जादुई रूख (मिराकल ट्री) भनेका छन्। मोरिंगा पातहरू आकारमा अण्डाकार हुन्छन्, र आकारमा सानो आकारमा राम्रोसँग डाँठमा व्यवस्थित हुन्छन्, सामान्यतया उपचारको लागि तरकारीको रूपमा पकाइन्छ। मोरिङ्गा पातको प्रभावकारिताको बारेमा 1980 देखि पात, त्यसपछि बोक्रा, फल र बीउहरूमा अनुसन्धान सुरु गरिएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले मोरिंगाको पातमा पाइने ठूलो सामग्रीका फाइदाका कारण केराभन्दा तीन गुणा बढी पोटासियम, दूधभन्दा चार गुणा बढी क्याल्सियम, सात गुणा बढी भिटामिन पाइने भएकाले बाल्यकालमा बालबालिका र शिशुहरूलाई यसको सेवन गर्न सिफारिस गर्छ। सुन्तला भन्दा सी, गाजर भन्दा चार गुणा बढी भिटामिन ए, दूध भन्दा दोब्बर प्रोटिन।
मोरिंगाको पातका महत्वपूर्ण फाइदाहरू पत्ता लगाएपछि डब्ल्यूएचओ संगठनले मोरिङ्गा रूखलाई चमत्कारी रूखको रूपमा नाम दिएको छ। En.wikipedia.org 1,300 भन्दा बढी अध्ययनहरू, लेखहरू र रिपोर्टहरूले मोरिङ्गाका फाइदाहरू र यसको निको पार्ने क्षमताहरू वर्णन गरेका छन्, जुन रोगको प्रकोप र कुपोषण समस्याहरूको सामना गर्न महत्त्वपूर्ण छन्। अनुसन्धानले देखाउँछ कि मोरिंगा बिरुवाको लगभग हरेक भागमा महत्त्वपूर्ण गुणहरू छन्, जुन धेरै तरिकामा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
मोरिंगा पातहरु को लाभ।
तौल कायम राख्नुहोस्।
बिर्सनु हुँदैन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा शरीरलाई यसको वजनसँग सन्तुलनमा राख्नु हो। विज्ञहरूद्वारा गरिएको अध्ययनले मोरिङ्गा चियाले पाचन सम्बन्धी समस्याहरूको सामना गर्न मद्दत गर्छ जसका फाइदाहरू इष्टतम क्यालोरी जलाउनको लागि शरीरको चयापचयलाई उत्तेजित गर्ने हो।
मोरिंगाको पातबाट बनेको चियामा उच्च मात्रामा पोलिफेनोल हुन्छ, जसले एन्टिअक्सिडेन्टको रूपमा काम गर्छ। एन्टिअक्सिडेन्टका फाइदाहरू शरीरमा विषाक्त पदार्थहरूलाई डिटोक्सिफाई गर्न र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन।
अनुहारको दाग हटाउनुहोस्।
साधारण सामग्री, केही जवान मोरिङ्गा पातहरू लिनुहोस्, धेरै राम्रो नभएसम्म म्यास गर्नुहोस्, त्यसपछि यसलाई पाउडरको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् (वा पाउडरसँग पनि मिलाउन सकिन्छ), जुन केही देशहरूमा मोरिङ्गा निकासीको लागि कस्मेटिक्स बनाउन कच्चा मालको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। छाला। मोरिंगा बिरुवाका भागहरू जुन छालाको लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ बोक्रा, पातहरू, फूलहरू र बीउहरू हुन्।
मोरिङ्गाको पातमा क्याल्सियम जस्ता पोषक तत्वहरू र तामा, फलाम, जिंक (जिंक), म्याग्नेसियम, सिलिका र म्यांगनीज जस्ता खनिजहरू हुन्छन्। मोरिंगा पातहरू पनि प्राकृतिक मोइस्चराइजर हुन सक्छ, मृत छाला कोशिकाहरू हटाउन र छाला सफा गर्न प्रयोग गर्दछ।
मोरिंगाको पातमा ३० भन्दा बढी एन्टिअक्सिडेन्टहरू हुन्छन् जुन छालाको स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ। मोरिंगा पातहरू खनिज र एमिनो एसिडमा धनी हुन्छन् जसले कोलाजेन र प्रोटीन केराटिन उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ, जुन शरीरका सबै छालाको तन्तुहरूको स्वास्थ्यको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
त्यहाँ कस्मेटिक उत्पादनहरूको धेरै प्रसिद्ध ब्रान्डहरू छन् जसले मोरिंगा तेललाई उनीहरूको उत्पादनहरूको लागि कच्चा मालको रूपमा प्रयोग गर्दछ। विशेष गरी छाला हेरचाह उत्पादनहरू जस्तै एन्टिएजिङ क्रिमहरू, एन्टि-रिङ्कल क्रिमहरू, अरोमाथेरापी तेलहरू, फेसियल फोमहरू, लोशनहरू, लाइटनिङ क्रिमहरू र डिओडोरेन्टहरू।
यस मोरिंगा बोटको फाइदाहरू छालाको स्वास्थ्य र सौन्दर्यको लागि अपरिहार्य छन्, मोरिंगा पातहरू, मोरिंगा तेलदेखि मोरिंगा फूलहरू सम्म। मोरिंगा फूलहरू प्राय: कस्मेटिक्स र इत्र, कोलोन, कपालको तेल, र अरोमाथेरापी तेलहरूको लागि कच्चा मालको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। मोरिंगा फूलहरूमा उच्च ओलिक एसिड हुन्छ, धेरै राम्रोसँग तेलमा परिष्कृत हुन्छ। मोरिंगा फूलको तेललाई अवशोषित गर्न र सुगन्ध कायम राख्नको लागि भर पर्न सकिन्छ।
सौन्दर्यको लागि मोरिंगा पातहरू प्रयोग गर्दै।
कसरी? पहिले मोरिंगाको पातको पेस्ट बनाउनुहोस्। मोरिंगा पातहरू छान्नुहोस् जुन अझै पनि हरियो र ताजा छ, शाखाहरूबाट अलग। थोरै पानी थपेर मोरिंगा पातहरू प्युरी गर्नुहोस् (ताकि मोरिंगा पातहरू पेस्ट बनाउँदछ)। त्यसपछि मास्कको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, मोरिंगा पातको पेस्ट फ्रिजमा3दिनको लागि भण्डारण गर्न सकिन्छ।
मोरिङ्गा पातले स्तनपान गराउने आमा र बच्चाहरूलाई पोषण प्रदान गर्दछ।
इन्डोनेसियामा मोरिंगा बिरुवाहरूको फाइदाको विकास विदेशको तुलनामा अपेक्षाकृत ढिलो छ। तर, यसलाई स्वदेशी र निर्यात बजार हिस्साका लागि विकास गर्ने अवसर अझै बाँकी छ । स्तनपान गराउने आमा र बच्चाहरूमा पोषण सुधार गर्न मोरिंगा बिरुवाको फाइदाको लागि बजार विकास गर्ने ठूलो सम्भावना छ।
मोरिङ्गाको पातमा प्रोटिन, आइरन र भिटामिन सी हुन्छ। साथै, त्यहाँ फ्लेभोनोइड तत्वहरू पनि हुन्छन् जसका फाइदाहरू स्तनपान गराउने आमाहरूलाई बढी स्तन दूध उत्पादन गर्न मद्दत गर्ने हो। प्रोटिन सामग्री गुणस्तरीय स्तन दूध बनाउँछ।
उच्च फलाम सामग्री, जुन पालक भन्दा 25 गुणा बढी हुन्छ, आमाहरूले बच्चा जन्माएपछि उपभोग गर्न सिफारिस गरिन्छ, जहाँ महिनावारी भएका महिलाहरूले सामान्यतया धेरै फलाम गुमाउँछन्। बच्चाहरु को लागी, यो बच्चा देखि उपभोग गर्न सकिन्छ, अर्थात् छ महिना भन्दा बढी बच्चाहरु। गर्भवती महिलाहरूले गर्भावस्थाको समयमा, विशेष गरी पहिलो त्रैमासिकमा मोरिङ्गा पातहरू उपभोग गर्नबाट बच्न आवश्यक छ।
मोरिङ्गाको पातमा भिटामिन ए को मात्रा धेरै हुन्छ जुन आँखाको लागि धेरै राम्रो छ। आँखाका अंगहरू सधैं स्वस्थ र स्पष्ट अवस्थामा रहनका लागि मोरिंगाको पातको सेवन उपयोगी हुन्छ।
मोरिंगाको पातहरू आँखाको रोग निको पार्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, सिधै खान सकिन्छ (पातहरू सफा गरेपछि)। मोरिङ्गाको पातमा प्रशस्त मात्रामा पौष्टिक तत्व पाइन्छ, जसमध्ये एक हो भिटामिन ए र क्याल्सियम।
मोरिङ्गाको पातमा पाइने भिटामिन ए सामग्रीले आँखाको स्वास्थ्य जोगाउन उपयोगी छ, चाहे यसले प्लस, माइनस, सिलिन्डर र मोतियाबिन्दुको जोखिम कम गर्न थाल्छ। मोरिङ्गाको पात मधुमेह रोगीहरूले खाँदा पनि राम्रो हुन्छ र तिनीहरूको आँखा सफा गर्न उपयोगी हुन्छ।
एन्टिअक्सिडेन्ट र एन्टी-इन्फ्लेमेटरी यौगिकहरू।
एसिया प्यासिफिक जर्नल अफ क्यान्सर प्रिभेन्सनमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार मोरिङ्गाको पातमा आवश्यक एमिनो एसिड, क्यारोटिनोइड फाइटोन्यूट्रिएन्ट्स, क्वेर्सेटिन जस्ता एन्टिअक्सिडेन्ट र प्राकृतिक एन्टिब्याक्टेरियल कम्पाउन्ड हुन्छ जसले एन्टि-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जस्तै काम गर्छ।
मोरिंगा पातहरूमा धेरै एंटी-एजिंग यौगिकहरू छन् जसले अक्सिडेटिभ तनाव र सूजनको प्रभावलाई कम गर्न सक्छ। पोलिफेनोलिक यौगिकहरू, भिटामिन सी, बिटा-क्यारोटिन, क्वेर्सेटिन, र क्लोरोजेनिक एसिडको उपस्थितिको साथ फाइदाहरू बढ्दो इष्टतम छन् यी यौगिकहरू पेट, फोक्सो, कोलोन क्यान्सर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, र जस्ता दीर्घकालीन रोगहरूको लागि कम जोखिमसँग सम्बन्धित छन्। जोखिम कारकहरु को कारण आँखा रोग। उमेर।
मृगौलाको स्वास्थ्य कायम राख्नुहोस्।
स्वस्थ खानाको उपभोगले मिर्गौलालाई राम्रोसँग काम गर्न (कार्य गर्न) स्वचालित रूपमा मद्दत गर्छ, अन्यथा अस्वस्थ खाना (जसमध्ये एक उच्च बोसोयुक्त खाना हो) मिर्गौलामा जम्मा भएर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछ। मोरिङ्गा पातको उपभोगले, पहिले नै खराब अवस्थामा रहेको मृगौलाको स्वास्थ्यलाई स्वचालित रूपमा पुनर्स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ।
बढ्दो उमेरको प्रभावलाई कम गर्छ।
फूड साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीको जर्नलमा प्रकाशित 2014 को अध्ययनले मोरिंगाका फाइदाहरूको परीक्षण गर्‍यो। मूल्यवान एन्टिअक्सिडेन्ट इन्जाइमहरूको स्तरको बारेमा थाहा पाएर, अनुसन्धानकर्ताहरूले मोरिंगा पातहरूले प्राकृतिक रूपमा हर्मोन सन्तुलन गर्न सक्ने प्राकृतिक हर्बल एन्टिअक्सिडेन्टहरू प्रयोग गरेर, बुढ्यौलीको प्रभावलाई कम गर्न मद्दत गर्न सक्छन् कि भनेर अनुसन्धान गर्न चाहन्थे।
अध्ययनमा ४५ देखि ६० वर्ष उमेरका ९० पोस्टमेनोपजल महिलालाई तीन समूहमा विभाजन गरिएको थियो, जसलाई विभिन्न स्तरको पूरक आहार दिइयो। नतिजाहरूले देखाए कि मोरिंगा र पालकको साथ पूरकले एन्टिअक्सिडेन्ट यौगिकहरूमा उल्लेखनीय वृद्धि ल्यायो, जसले बुढेसकालको प्रभावलाई कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
बाथ रोगको उपचार मोरिङ्गाको पातहरू वात रोगको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
वात रोगको उपचारमा मोरिङ्गाको पातको प्रयोगले जोर्नीको दुखाइ कम गर्न र जोर्नीहरूमा युरिक एसिडको निर्माणलाई कम गर्छ, जुन बाथ वा गाउटको समस्यालाई जित्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यस मोरिंगा पातको फाइदाहरू वात, दुखाइ, दुखाइ आदिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
हृदय रोग को रोकथाम।
फेब्रुअरी 2009 को “जर्नल अफ मेडिसिनल फूड” को अंकमा प्रकाशित एउटा प्रयोगशाला पशु अध्ययनले पत्ता लगायो कि मोरिंगा पातहरूले हृदयको क्षतिलाई रोक्न र एन्टिअक्सिडेन्ट फाइदाहरू प्रदान गर्दछ। अध्ययनमा, 30 दिनसम्म दैनिक शरीरको तौलमा 200 मिलिग्राम प्रति किलोग्रामको खुराकले अक्सिडाइज्ड लिपिडको स्तर कम गर्यो र हृदयको तन्तुलाई संरचनात्मक क्षतिबाट बचाउँछ। शोधकर्ताहरूले निष्कर्ष निकाले कि मोरिंगा पातहरूले मुटुको स्वास्थ्यको लागि महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू प्रदान गर्दछ। यी निष्कर्षहरूलाई बलियो बनाउन थप अनुसन्धान अझै आवश्यक छ।
महिलाहरूको लागि मोरिंगा पातहरूको फाइदाहरू।
महिलाहरु को लागी, मोरिंगा पात को खपत कुनै नयाँ कुरा नहुन सक्छ। मोरिंगाको पातले महिलाको प्रजनन अंगको स्वास्थ्य कायम राख्न राम्रो मानिन्छ । तर यो बाहिर जान्छ कि महिलाहरु को लागी मोरिंगा पातहरु को फाइदाहरु धेरै छन्। यी फाइदाहरू समावेश छन्;
गर्भवती महिलाहरु मा एनीमिया को रोकथाम।
एनिमिया गर्भवती महिलाहरु को लागी एक जोखिमपूर्ण रोग हो। किनभने गर्भवती महिलाको शरीरमा रगतको मात्रा आफू र आफूले जन्माउने बच्चाको स्वास्थ्यलाई कायम राख्न आवश्यक हुन्छ। यसबाहेक, एनिमिया पनि बच्चा जन्माउने प्रक्रियामा खतरनाक हुन्छ। गर्भवती महिलाहरूमा एनिमियाको खतरा हटाउन मोरिङ्गाको पातको सेवन एक समाधान हुन सक्छ। मोरिङ्गाको पातमा हेमोग्लोबिन बढाउने क्षमता हुन्छ जसले गर्दा एनिमियाको जोखिमलाई रोक्न सकिन्छ।
गर्भवती महिलाहरु मा जटिलता को जोखिम को रोकथाम।
गर्भावस्थाको समयमा जटिलताहरू जो कोहीलाई हुन सक्छ। यसबाट बच्नका लागि गर्भवती महिलाले पोषक तत्व र भिटामिनयुक्त खानेकुराको सेवन गर्नुपर्छ । मोरिंगा पातहरू गर्भवती महिलाहरूको लागि स्वस्थ खाना छनौट हुन सक्छ। किनभने यो पातमा गर्भावस्थामा चाहिने धेरै पोषक तत्व र खनिजहरू हुन्छन्।
स्तन दूध उत्पादन बढाउनुहोस्।
आमाको दुध वा आमाको दूध चाहिन्छ किनभने बच्चा जन्मेपछि मुख्य खाद्यान्न उपभोग आमाको दूधबाट हुन्छ। दुर्भाग्यवश, सबै महिलाहरूले जन्म दिए पछि तुरुन्तै स्तन दूध उत्पादन गर्न सक्दैनन्, कहिलेकाहीँ यसले पहिले बूस्टर लिन्छ ताकि दूध बाहिर आउन सक्छ।
मोरिंगा पातहरूमा कटुक पातहरू जस्तै ग्यालेक्टोगोग प्रभाव हुन्छ। यस प्रभावले स्तन दूध उत्पादन बढाउन सक्छ। आमाको दूधको प्रचुर मात्रामा, बच्चाको पोषण आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकिन्छ।
रजोनिवृत्ति पछि एन्टिअक्सिडेन्टहरू बढाउनुहोस्।
एस्ट्रोजन हर्मोनको उत्पादनमा कमीको कारणले गर्दा महिलाहरूमा एन्टिअक्सिडेन्टको स्तर घटाउन सकिन्छ। यी एन्टिअक्सिडेन्टहरू बढाउनको लागि, यो दलियाको रूपमा मोरिंगा पातहरू उपभोग गर्न सिफारिस गरिन्छ। मोरिंगा पातहरूले एन्टिअक्सिडेन्टहरू बढाउने विश्वास गरिन्छ जुन स्वस्थ शरीरलाई कायम राख्न महत्त्वपूर्ण छ।
मोरिंगा पातहरू कसरी सही तरिकाले प्रशोधन गर्ने
मोरिंगा पातहरूको फाइदाहरू कायम राखिएको छ, त्यसोभए तपाईंले तिनीहरूलाई कसरी प्रशोधन गर्ने भनेर जान्नुपर्दछ। मोरिंगा पातहरू ठीकसँग खेती गर्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्, जस्तै:
चियामा प्रशोधन गरियो।
यस तरिकाले मोरिंगा पातहरू प्रशोधन गर्न। तपाईंले मोरिंगा पातहरू सुक्खा छन् भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। त्यस पछि, एक कपमा मोरिंगा पातहरू राख्नुहोस् र यसलाई चिया बनाउनुहोस् जस्तै बनाउनुहोस्। तपाईं स्वाद थप्नको लागि चिनी वा मह पनि थप्न सक्नुहुन्छ।
यो विधि सबैभन्दा सामान्य तरिका हो। तर यस तरीकाले मोरिंगा पातका सबै भागहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। उमालेको पानी पिउन सकिन्छ र उमालेको पातलाई सलादको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
मोरिंगा पातको तरकारी स्वादिलो ​​मात्र नभएर फाइदाका दृष्टिले पनि भरपुर हुन्छ । मोरिंगा पातहरूलाई मीठो मकै र केही मसलाहरू थपेर स्पष्ट तरकारी बनाउन सकिन्छ जसले स्वादलाई अझ राम्रो बनाउँदछ।
राम्रो समाचार! हामी तपाईंको आफ्नै ब्रान्ड / निजी लेबल मोरिंगा / मोरिंगा ओलिफेरा उत्पादनको सेतो लेबल उत्पादनहरू प्रयोग गरेर मोरिंगा तयार उत्पादनहरू उत्पादन गर्न सक्छौं – हामीलाई फोन / व्हाट्सएप मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस्: +62-877-5801-6000
Previous post: Moringa Exporter & Private Label Moringa ထုတ်လုပ်ခြင်း။
Next post: Vil du lage ditt eget Moringa-produkt?